साफ महिला च्याम्पियनसिप: बंगलादेश बिरुद्द नेपाल, को बन्ला समूह विजेता? | KhelNepal
साफ महिला च्याम्पियनसिप: बंगलादेश बिरुद्द नेपाल, को बन्ला समूह विजेता?
बिराटनगरमा जारि पाचौं अन्तर्राष्ट्रिय साफ महिला च्याम्पियनसिप अन्तर्गत समुह ‘ए’ को अन्तिम खेलमा नेपालले बंगलादेशको सामना गर्दैछ। भुटानलाई पराजित गर्दै दुवै टिम यसअघि नै सेमीफाइनलमा प्रवेश गरिसकेका छन्।
आज दिउसो ३ बजेदेखि सुरु हुने खेल जित्दै दुवै टिम समूह बिजेताको रुपमा अर्को चरण प्रवेश गर्ने लक्ष्य सहित मैदान उत्रिने छन्। नेपालले भुटानलाई ३-० को अन्तर तथा बंगलादेशले २-० को अन्तरले पराजित गरेको थियो।
यसअघि नेपाल र बंगलादेश बीच भएका प्रतिस्पर्धाहरुमा नेपालले बाजी मारेको थियो। अहिलेसम्म भएका ५ खेलमध्ये नेपालले ४ खेलमा जित निकालेको थियो भने १ खेल बराबरी भएको थियो। नेपालले दुई पटक ३-० को नतिजा निकाल्दा दुई पटक १-० को नतिजा निकालेको थियो। अन्तिम पटक म्यान्मारमा आयोजना भएको ओलम्पिक छनौट खेलमा भने दुवै टिमले १-१ गोल गर्दै अंक बाडेका थिए।
फाल्गुन २८ गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा नेपाललगायत भारत, बङ्गलादेश, भूटान, श्रीलङ्का र माल्दिभ्सको राष्ट्रियस्तरको महिला फुटबल टोलीको सहभागिता रहेको छ। समूह ‘ए’ मा नेपाल, बंगलादेश र भुटान तथा समूह ‘बि’ मा भारत, श्रीलंका र माल्दिभ्स रहेका छन्।